“Cool” Ry Mpifanandrina o! Hoy Ireo Mpanao “Ice Bucket Challenge” Ao Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Septambra 2014 17:53 GMT
Nisy vondrona facebook misokatra hoan'ny rehetra antsoina hoe “Be Cool” (Mba mahafinaritra – Milamina) namoaka lahatsary tamin'ny 30 Aogositra ahitana Afghàna roa nahavita ilay hetsika malaza amin'izao fotoana izao antsoina hoe ice-bucket challenge (Haika Fanondrahana rano mangatsiaka) ho fitadiavana filaminana politika. Mametraka kizo politika ao amin'ny firenena ankehitriny ireo kandidà nirotsaka hofidiana filoham-pirenena, Abdullah Abdullah sy Ashraf Ghani hatramin'ny 7 Jolay, raha nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lazaina fa nanjakan'ny halabato goavana i Ghani. Ao anatin'ny fotoana fanamarinana ny latsabato niato noho ny fialan'ny mpanaramaso avy amin'ny Abdullah ao amin'ny vaomiera mpanao ny fanamarinana, nangataka tamin'izy roa lahy mpanao politika ireo mamon'ny rano mangatsiaka mba hanaiky izay ho valin'ny fanamarinana – na inona na inona mety ho valiny – mba hitombina ny fahefana ary ho voaantoka ny famindram-pahefana ara-pomba demokratika voalohany eo amin'ny tantaran'ny repoblika. Efa anjatony ireo mizara ny lahatsary hatramin'izay fotoana izay.
Pikantsary hafa nalaina tao amin'ny lahatsary. Hoy ny vakin'ny dikantsoratra “Ry Afghàna hajaina, Milamina anl!!!”
Ialohavan’ ity hafatra an-tsoratra nosoratan'i Wahid Rahimdil ity ny horonantsarimihetsiky ny pejin'ny vondrona :
Masood Babak naneho hevitra hoe:
Ilay fanondrahana amin'ny ranomandry indray no tsy ankasitrahan'ny mpanohana ny hetsika. Saïd Osmani nanoratra hoe:
Nitsikera ity hetsika ity i Tareq Osmani, hoy izy:
Ny fandavan’i Amanullah nouristani:
Avy amin'ny antokon'i Abdullah Abdullah no mahatonga disadisa ara-politika amin'izao fotoana. Saika nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fihodidina voalohany ilay dokotera teo aloha sady mpiady mpanohitra avy ao amin'ny Firaisankinan'i Avaratra, saingy nitsimbadika izany fitarihany izany tamin'ny fihodidina faharoa. Tamin'ny 27 Jiona, namoaka fandraisam-peo ny ekipany izay nilazan'izy ireo fa natao hahazoan'i Ghani vahana ny porofon'ny hosoka tamin'ny fandatsaham-bato rehefa natao indray. Niala an-daharana tamin'ny fanamarinana ataon'ny Firenena Mikambana tontosaina amin'izao fotoana izao i Abdullah, nilaza ny ekipany fa “banga” ny fanamarinana. Ny fotoana nialàna io no nampiakatra ny disadisa izay niteraka ny Be Cool challenge [Fanambin'ny Milamìna].
Raha efa nangoron'entana sahady i Karzai ary vonona handao ny lapam-panjakana, mbola tsy tonga ny mpisolo toerana handray ny andraikiny. Araka ny filazan'i John Kubis, solontena manokan'ny firenena mikambana ao Afghanistana, amin'ny 10 Septambra no hambara izay ho mpandresy amin'ny fifidianana.